Fametrahana amin’ny fomba ofisialy ny Fitsarana Avo – Sénat de Madagascar
June 4, 2018 Landivola CATUCIA
Araka ny voasoratra ao amin’ny lalàmpanorenana andininy 131 ka hatramin’ny 136 sy ny lalàna Fehizoro 2015 dia tafapetraka tamim-pomba ofisialy ny 01 jona 2018 ny Fitsarana Avo .Nontotosaina tetsy amin’ny Fitsarana Tampony Anosy ny Fianianana nataon’ireo mpikambana miisa 24 mandrafitra ity Andrimpanjakana ity. Marihina fa ireo mpikambana ireo dia avy amin’ny fianakaviamben’ny Fitsarana , Antenimierandoholona sy ny Antenimierampirenena ary ny Filankevitra Ambony momba ny Demokrasia sy ny Tany Tan-dalàna.
Ny Mpitsara RAJAONA Randriamanakandrianina no voatenrdy ho filohan’ny Fitsarana Avo. Isan’ny andry iray lehibe ho fampiarana ny Fitondrana tsara tantana ity Andrimpanjakana vaovao ity ary antoka ho amin’ ny fitokisan’ny vahoaka sy ireo mpandraharaha vahiny ary koa ireo mpiara –miombon’ antoka ny fijoroany, satria ny andraikiny dia misahana ireo fitarainana apetraky ny vahoaka mikasika ny fanatontosana ny asa sahanin’ ireto sokajin’olona manaraka ireto: Filohampirenena, Praiminisitra, Filohan’ny Antenimierandoholona, Filohan’ny Antenimierampirenena, Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana.
Ny didy avoakan’ity Fitsarana Avo ity dia tsy azo ivalozana fa mihatra avy hatrany. Famerenana ny fandinihana no azo atao raha misy fitarainana mipetraka momba ny didim-pitsarana . Raha tsy manatrika kosa ny voatory, dia afaka manao fanohanana..Fampandrosoana maharitra no tanjona amin’ny fametrahana azy .
Ankoatra ny Praiministra sy ny Filohan’ny Antenimierandoholona, dia maro ireo olo-manan-kaja ambony sy vahiny tonga nanotrona izany fotoana izany.